सेप्टेम्बर या अक्टोबर 2016 येशू ख्रीष्टको फिर्ती | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
येशू ख्रीष्ट को फिर्ती को विषय सम्बोधन अघि, ख्रीष्टियन केही आधारभूत सम्झँदा र विशेष गरी अन्त समयमा विश्वास बाँच्न लायक छ।
अन्त समयमा मसीहीहरूलाई BE
पहिलो हुन मसीही परमेश्वरको सबै कुराको सृष्टिकर्ता छ र यसैले पनि हामी परमेश्वरको सृष्टि हो भनेर बुझ्न छ।
यो पनि परमेश्वरले हामीलाई मुक्त र परमेश्वरले हामीलाई « जीवन » दिनुभएको यो अद्भुत उपहार कसरी प्रयोग हामी आफूलाई निर्णय भनेर स्वतन्त्र इच्छा संपन्न सिर्जना बुझे छ।
राम्रो परमेश्वर र मानिसको सृष्टिको बुझ्न, म तपाईंलाई निमन्त्रणा मेरो पुस्तक पढ्न : « अन्धकारको प्रतिफलको धर्मप्रचारक राजा प्रकाश आउँछ » पुस्तक बारेमा लेख हेर्नुहोस् – राजा को धर्मप्रचारक फर्काउनुहोस् बुक
आफ्नो अनन्त कृपा मा परमेश्वरले हामीलाई यो सबै बहुमूल्य « जीवन » दिइएको छ दुर्भाग्य सानो यसको साँचो मूल्य मा सराहना। जीवन बदलामा हामीलाई बाट केहि माग बिना परमेश्वरले हामीलाई दिइएको थियो। यो एउटा उपहार हो। तर जीवन अनिवार्य समाप्त एक दिन भनेर।
केही लागि, दुर्भाग्य, यो अरूको लागि तिनीहरूले blithely सय वा बढी वर्ष पुग्न एक युवा उमेर भनेर जीवन रोक्छ, हो।
र त्यसपछि, बस शरीर को मृत्यु को क्षण पछि, प्राण यसको निर्माता अघि देखिन्छ।
हामी समय परमेश्वरको सृष्टि हो र यसैले मृत्युको क्षण मा प्राण अन्तिम न्यायको समयमा सीधा आएको बुझ्न पर्छ।
यो परीक्षणमा तीन विकल्प त प्राण उपलब्ध छन्।
जीवनको एक विकृति गर्ने केही नरक मा सदाको खर्च गर्न बर्बाद गरिनेछ।
विशाल बहुमत जीवन शुद्ध न त perverse न थियो « वार्म » तैपनि पनि नरक मा सदाको खर्च जानुहोस्।
तापनि आफ्नो उदाहरणीय जीवन नरक मा सदाको खर्च आदर र धार्मिकताको एक स्वस्थ जीवन ती पनि जानेछन्।
मसीही हुँदा सबै प्राण नरक मा सदाको खर्च गर्न को जन्म निन्दा गर्दै छन् बुझ्न छ। यो एक निश्चितताका छ!
र म केही नरक आफ्नो जीवन कालमा प्रेरित आधारित अरूलाई भन्दा केही लागि कम पीडादायी हुनेछ भने मलाई भन्न अनुमति दिन्छ।
कुनै अशुद्ध कुरा स्वर्गको राज्य प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र धरती हाम्रो मरणशील जीवन को अन्त मा मूल पाप सबै वाहक हुन्, त्यसैले हामी सबै नरक मा अनन्त जीवन खर्च गर्न निन्दा गर्दै हुनुहुन्छ।
के हुनेछ नरक कुनै एक ठीक थाह छ, तर, हनोक पुस्तकमा हामी एक सिंहावलोकन, त्यहाँ स्वर्गमा ठाउँ हुन् वा सदाको लागि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन भएको सबै सिर्जनाहरू बन्द छन् कि टिप्पण छ। येशू ख्रीष्ट नरक बताउनुभयो evokes गेहेन्ना (तर केही बाइबल के ठीक गेहेन्ना भन्छन्) म पनि यो मेरो लेखमा नरक हुन सक्छ कि hypothesized: परमेश्वरले बुझ्न बुझ्ने नरक ,
यो नरक जहाँ परमेश्वरको प्रेम को बाहिर अनन्त जीवन अवस्थित ठाउँ छ कि मानिसहरू डराउँदैनन् गर्न छ। तर नियन्त्रण र आफ्नो स्वर्गदूतहरूको पर्यवेक्षण अन्तर्गत अझै पनि छ। (हनोक पुस्तकमा हेर्नुहोस्) https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/
मसीही हुँदा येशू ख्रीष्ट मात्र प्रेमले हामीलाई आदम र हवाको अनाज्ञाकारिताले देखि मानिसजातिको लागि परमेश्वरको द्वारा योजना यो hellish सदाको भाग्य उम्कन आशा गर्न सक्षम पार्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्न छ।
गर्न एक मसीही पापी पहिचान र येशू ख्रीष्ट यस hellish भाग्य को प्रेमले बचत गर्न स्वीकार हुन छ।
मसीही हुँदा स्वीकार र बाँच्न प्रेम, शान्ति, प्रेम, दया र नम्रता मा येशू ख्रीष्टको शिक्षा अनुसार छ।
मसीही हुँदा, पानी बप्तिस्मा भइरहेको आत्मा र फेरि जन्मन।
पानीको बप्तिस्मा गरेर हामी हाम्रो पापको पश्चात्ताप र प्रेम र उहाँले क्रूसमा हाम्रो लागि बगाएको रगत स्वीकारेर बचत गर्न येशू ख्रीष्ट आउँछन्।
आत्माको बप्तिस्मा मार्फत हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा मार्गदर्शन गर्न अनुरोध। पानीको बप्तिस्मा प्राप्त गरेपछि मसीही मार्गदर्शन र आफ्नो जीवन व्यवस्थापन गर्न परमेश्वरले सोध्न प्रार्थनामा व्यक्तिगत दृष्टिकोण बनाउनु पर्दछ।
त्यसैले शरीर को इच्छा तर आत्मा ती द्वारा अब जीवन हिंड्न। यो आत्माको बप्तिस्मा छ।
यसरी हामी प्रेम, शान्ति, प्रेम, दया र नम्रता हाम्रो जीवन पछि लाग्दा हाम्रो पार्थिव जीवन फेरि जन्मेका छौं। तर चाव मा उहाँको आज्ञा पालन र हाम्रो सहयोग खोज्नेहरूलाई मदत गरेर परमेश्वरको सेवा, येशू ख्रीष्टको शिक्षा पालन गर्न। तपाईं ल्याउन एक पाप र दुष्ट कामहरूमा विद्यमान यसलाई प्राप्त गर्ने नेतृत्व हुँदैन सावधानी मद्दत। न त येशू ख्रीष्टको शिक्षा अस्वीकार गर्न तपाईं नेतृत्व।
तपाईं एक मद्दत बनाउन जब तपाईं यो सहायता को प्रयोगको लागि जिम्मेवार हुन्छन्।
यसरी लागुपदार्थ दुर्व्यसनी पैसा दिने तथ्यलाई वा पिएको तपाईं राम्रो काम पुनरावलोकन गर्दैछौं विचार गरौं गर्दैन। उहाँले पैसा तपाईं सोध्नुहुन्छ भने उहाँलाई रोटी प्रस्ताव। पनि राम्रो काम पुनरावलोकन गर्दैछौं भनेर विश्वास गर्न नेतृत्व हुँदैन माग्छु केटाकेटीलाई जो प्रयोग ती पैसा दिने भन्ने तथ्यलाई। तपाईं छोराछोरीलाई यो दुरुपयोग लागि जिम्मेवार हुन्छन्।
पृथ्वीमा हाम्रो जीवन पछि, मसीही न्याय परमेश्वरको सामु देखिन्छ। र येशू ख्रीष्टको प्रेमले, उहाँले सीधा नरक रहेको छ।
मसीही आफ्नो जीवनको काम राम्रो भए, त्यो स्वर्गको राज्य जानेछन्, न्याय गरिएको छ। आफ्नो जीवनको काम एकदम राम्रो छैन भने, यो स्वर्गको राज्य प्रवेश गर्नु अघि Purgatory पास हुनेछ।तर आफ्नो जीवनको कामहरू खराब थिए भने उहाँले नरक जानेछ उहाँले ख्रीष्टियान बने तापनि।
दुई हजार वर्ष को लागि यस यति छ।
तर हामी समय को अन्त मा छन् र कुराहरू एक बिट परिवर्तन।
के परिवर्तन समय को अन्त मा येशू ख्रीष्ट हजार वर्ष अन्तिम न्यायको मानवता अलग हुनेछ लागि त्यहाँ शासन गर्न धरती फर्कन पर्छ भन्ने छ।
र राम्रो हामीले यसलाई चाँडै नै हुनेछ भन्ने आशा मा येशू ख्रीष्टको फिर्ती पर्खिरहेका छन्।
पृथ्वीमा ख्रीष्टको शासन हुन सदाको एक foretaste, हामी अब बाँच्न हुनेछ, तर यो अझै पनि अनन्त जीवन भइरहेको अघि मृत्यु पास हुनेछ।
दुष्ट हजार वर्षीय शासनको दौडान पृथ्वीबाट banished गरिनेछ। हामी प्रेम र शान्ति परमेश्वरको शासनको अधीनमा रहन हुनेछ।
तर, एक तर त्यहाँ छ किनभने, र यो महत्वपूर्ण छ। छ येशू ख्रीष्टको फिर्ती प्रसब को पीडा जस्तै हुनुपर्छ।
कति येशू ख्रीष्टको फिर्ती नजिकै छ र अब जीवन मानवता लागि गाह्रो छ।
हामी सबै विशेष गरी 29 देखि, वर्ष पार रूपमा देख्न सेप्टेम्बर 2008 सक्नुहुन्छ, र सबै भन्दा कठिन समयमा सबै स्तर मा। मेरो लेख हेर्नुहोस्: पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको प्रतिफलको पछिल्लो तीन चिन्हहरू!
धरती : भूकम्प, ज्वालामुखी eruptions, आँधीबेहरी, मुसलधारे वर्षा, हुर्रिकानेस, आगलागी, जलवायु परिवर्तन, Landslides, अज्ञात deafening हल्ला र माटो विशाल प्रायजसो खोंच सिर्जना संक्षिप्त गर्छ।
स्वर्ग: meteorite घोप्टो, सौर eruptions, Nibiru, सौर प्रणाली ग्रह को वार्मिंग, उफौ को फिर्ती घोषणा।
वन्यजन्तु : मृत पशुधन, जंगली जनावर र चरा र माछा हरेक वर्ष लाखौं द्वारा अस्पष्टीकृत।
मानवता : खण्डहर, महामारी, मान, प्रस्थान, हिंसा, युद्ध तथा युद्ध को अफवाहहरु को हानि।
मण्डली : धर्मत्याग उच्चतम स्तर मा देखिने छ। यो पोप परमेश्वरको बाटो सबै धर्म चिनन द्वारा येशू ख्रीष्टको शिक्षा repudiated छ। तसर्थ, येशू ख्रीष्टको धेरै शब्दहरू भूल « म बाटो सत्य र जीवन हुँ; कुनै एक पिताको तर मलाई द्वारा आउँछ! «
येशू ख्रीष्टको यी शब्दहरू शक्तिशाली हुन्छन् र विवाद गर्न आफूलाई उधारो छैन।
अज्ञात deafening शोर को Apocalypse तुरही रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।Https://youtu.be/mTOQvDzihTU
यी सबै घटनाहरू त outsized उत्पन्न र अन्त समयमा र येशू ख्रीष्टको फिर्ती घोषणा गर्न बाइबलमा भविष्यवाणी गरेका थिए।
सबै मानवता जगाउन परमेश्वरले गरेको छ, तर दुर्भाग्य धेरै केही हामी बाँच्न विशेष पटक सजग हुन थाल्छ।
पुरुष पनि मसीहीहरू, अर्को सप्ताह गर्नेछ वा सट्टा परमेश्वरको आफ्नो प्राण मुक्तिका लागि प्रार्थना को, महिनाको अन्त बन्द गर्नेछ कसरी कुन बारेमा थप लाग्छ।
यद्यपि सबै समस्या र विपत्तिहरू जो मार्फत मानवता worsen हुनेछ र पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सम्म।
भयानक क्षण पनि राजा राजा येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि हामीलाई पर्खिरहेका छन्।
हामी inference द्वारा थाहा आफ्नो फिर्ती अघि अन्तिम क्षणमा मुश्किल हुनेछ।
झनै, हामी प्रार्थना र फेरि र फेरि हरेक दिन प्रार्थना गर्नुपर्छ।
हामी उहाँको मदत हरेक समय परमेश्वरलाई धन्यवाद र विशेष गरी यी कठिन समयमा र apocalyptic मा मार्गदर्शन र हाम्रो अस्तित्व को हरेक क्षणमा हाम्रो रक्षा गर्न, परमेश्वरको प्रार्थना गर्नुपर्छ।
मसीही हुँदा येशू ख्रीष्टको प्रेम नरक हामीलाई सुरक्षित गर्न परमेश्वरले प्रस्तावित हात छ भनेर बुझ्न छ।
प्रेम द्वारा नरक देखि हाम्रो प्राण बचत साथै येशू ख्रीष्ट पनि अर्थ आफ्नो शारीरिक फिर्ती अघि हामी एक नम्बरको बचत हुनेछ।
सुरक्षित गर्ने हुनेछ र येशू ख्रीष्टको मण्डली गठन हुनेछ ती, तिनीहरूले एक तत्काल महसूस परिवर्तन गरिनेछ प्रकाश को एक शरीर हुनेछ। तिनीहरू स्वर्गमा हटाइने छ र मृत्यु बिना अनन्त जीवन पार्थिव जीवन सिधै पहुँच हुनेछ।
तिनीहरूले जीवित थिए भने मृतक र जो छन् ती अपहरण गरिएको छ। प्रकाश को एक शरीर मा पुनरुत्थान हुनेछ र पनि जीवित देखि सुरक्षित गरिएको भएकाहरूलाई संग स्वर्गमा हटाइनेछ।
सँगै तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो चर्च गठन संग बनाउन हुनेछ अनन्त करार हुनेछ थुमाको विवाह उपस्थित।
परमेश्वरको सबै हालतमा हामीलाई उठाउनका लागि प्रयास गरिएको छ भने बहुमत सुरक्षित हुन कि र गर्न सक्ने राम्रो हटाइनेछ भनेर येशू ख्रीष्टको मण्डली को भाग हुन सक्छ छ।
येशू ख्रीष्ट र परमेश्वरको मानिस प्रेम!
तर कोसँग मानिस उहाँले अनन्त जीवन बिताउन इच्छा?
अन्त समयमा बकवास छ कि एक पल को लागि विचार छैन, यो प्रमाणहरू धेरै छन्, समय को अन्त साँच्चै चलिरहेको छ र केही यसलाई बन्द हुनेछ।
येशू ख्रीष्ट ढोकामा छ र यसको लागि आशा हाम्रो पापको, हाम्रो misdeeds, हाम्रा गल्ती, हाम्रा गल्ती र हाम्रो अशुद्ध विचार को पश्चात्ताप गर्न, बचत गर्न समय छ।
PROGRESS येशू ख्रीष्टको फिर्ती लक्षण
को संकेत को प्रगति को दृश्य मा हामी येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि अन्तिम खण्ड मा साँच्चै छन्।
म मेरो लेखमा व्याख्या पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको प्रतिफलको पछिल्लो तीन चिन्हहरू! त्यहाँ येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि तीन संकेत थिए।
विरोधी-ख्रीष्टको 01) अनावरण
02) यरूशलेमको मन्दिरमा तेस्रो पुनर्निर्माण
03) एक वैश्विक द्वन्द्व आफ्नो फिर्ती मा येशू ख्रीष्टले सहमत हुन
पहिलो साइन लागि « विरोधी ख्रीष्ट » हामी त्यहाँ धेरै स्तर छन् भन्ने बुझ्न पर्छ।
पहिलो चर्च भित्र, एटिक्राईष्ट को Lateran सम्झौताहरू देखि सबै क्रमिक राजा प्रसिद्ध को गठन गरिएको छ।
पछिल्लो पोपको « François » थुमाको कूटवेश अन्तर्गत नरक सोझो पालना गर्ने मसीहीहरूलाई जान्छ कि एक ब्वाँसो छ कि यो एटिक्राईष्ट ब्यक्तिकृत। : मेरो लेख हेर्नुहोस् क्याथोलिक चर्च मृत्युको आधिकारिक वक्तव्य
को प्रसिद्ध को मलाकी भविष्यवाणी अनुसार, पोप फ्रान्सिस अन्तिम पोपको छ। जसले रोम विनाश र येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि कष्ट समयमा चर्च नेतृत्व जो भविष्यवाणी « पत्रुसले रोमन », मा नाम छ।
रोम विनाश आवश्यक एक प्रमुख भूकम्प द्वारा रोम शहर विनाश, तर नयाँ रोम युरोप को पतन होइन « को Apocalypse पुस्तकको अध्याय XII को आठौं राजा। » र त्यसैले एटिक्राईष्ट प्रणाली।
हामी Apocalypse पुस्तकबाट र दानियललाई, महासङ्कष्टको अन्तिम 42 महिना द्वारा थाह छ।
रूपमा पोप फ्रान्सिस मार्च 13, 2013 निर्वाचित थियो हामी सायद ख्रीष्टको शायद तुरही को भोजमा समयमा सेप्टेम्बर वा अक्टोबर 2016 मा पृथ्वी फिर्ती, हेर्नुपर्छ त्यसैले।
: मेरो लेख हेर्नुहोस् डेनियल अन्त अन्त 2015 या 2016 को अन्तिम हप्ता को अन्त
विरोधी ख्रीष्ट पनि दुई जनावरहरू शैतानिक Trinity र एक झूटा अगमवक्ता जसको उद्देश्य मसीहीहरूलाई सताउन र नरक को बाटो मा तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गर्न छ को एक रूप हो।
हामी सजिलै हाल प्रसिद्ध को Apocalypse अध्याय 17 को पुस्तकमा वर्णन गरिएको जनावरको हो भनेर बुझ्न सक्छौं।
हेर्न केही विरुद्धमा पोप फ्रान्सिस झूटा अगमवक्ता। व्यक्तिगत म पोप फ्रान्सिस, समुद्रको दुई जनावरहरु को एक धेरै पूर्व-पोप अझै जीवित छ कि पूर्व पोप Benedict xvi हुनुको पृथ्वीको जनावरको छ भन्ने विश्वास गर्छन्। झूटा अगमवक्ता लागि जाँदा म मात्र जसको अनुयायीहरूलाई मसीहीहरूलाई सताउन एक, थाह छ।
यो भनिन्छ जो छ « मोहम्मद » 632 मा मृत हुनत Islamists र jihadists सेवा एक झूटो धर्मको जन्म दिए जो।
यो पुनर्निर्माण यहूदी मानिसहरूको वास्तविक इच्छा छ, तर परमेश्वरले झूटा अगमवक्ता को झूटो धर्मको मस्जिद « अल-Aqsa » नजिकै मन्दिरको पुनर्निर्माण कहिल्यै अनुमति दिन्छ।
नयाँ मन्दिर येशू ख्रीष्टको मन्दिर स्वर्गबाट ​​धमकना हुनेछ « स्वर्गीय यरूशलेममा »
यो येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि मात्र र अन्तिम खण्ड छ।
यो हामी शक्ति पहिले नै globalized छ जो यस द्वन्द्व र लाभ को मात्रा हेर्न र प्रत्येक दिन स्केल देखि 2012. यो युद्ध सुरु भएको छ स्पष्ट छ।
यो उनको फिर्ती मा येशू ख्रीष्ट लिन भनेर यो द्वन्द्व छ।
हामी फेब्रुअरी छन् र के मिडिया मा घोषणा गरिएको छ reassuring टाढा छ। टर्की र साउदी अरब सिरिया विरुद्ध युद्ध गर्न जान चाहन्छन्। रूस र इरान विरोध र यदि तिनीहरूले सिरिया आउन यी नयाँ लाश राख्ने बाकस belligerents एक फिर्ती प्रतिज्ञा।
आर्थिक क्षेत्रमा अफ्रिका र सिरिया मा अमेरिकी र यसको सहयोगीहरूले विरुद्ध युद्ध यसको आचरण लागि चीन। forcefully पूर्व मा यसको सैन्य हस्तक्षेप लागि, यो सैन्य रणनीति समय मात्र कुरा हो।स्पष्ट चिनियाँ रूसी सेना को समर्थन हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ।
यो येशू ख्रीष्टको बाइबल अनुसार यो युद्ध रोक्न पर्छ इस्राएलका Megiddo फाँटमा थियो ।
त्यसैले गर्दा सिरिया र इस्राएलका वर्तमान लडाई ओभरफ्लो आक्रमण गरिनेछ। त्यसपछि त्यहाँ कराउछ र आँसु हुनेछ तर ढिलो येशू ख्रीष्ट आउन र सुरक्षित हुन हुनेछ। किनभने यो अन्त समयमा येशू ख्रीष्टको फिर्ती पूरा हुनेछ भनेर नतिजा हुनेछ।
र यो सेप्टेम्बर वा अक्टोबर, 2016 को महिनाको लागि, यी संकेत को विश्लेषण छ सम्भव छ।
यो वर्ष 2016, हामी पहिले देखि नै यो 2015 भन्दा पनि बदतर हुनेछ भन्ने थाह अनि ख्रीष्टको यस वर्ष 2016 मा छैन आगामी हुन भने हामी भयानक कुरा आशा गर्नुपर्छ। यस्तो आर्थिक पतन रूपमा, तर पनि प्रकोप ठूलो आकार गर्न।
म कहिल्यै आफैलाई पर्याप्त बारम्बार, म एक अगमवक्ता छैन , र म पहिले नै हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती लागि छोटो अवधि लक्षित बारम्बार धोखा। बुरा गरेर म बारेमा गलत छैन वर्ष संकेत वर्ष को वृद्घि ।
म येशू ख्रीष्टको प्रतिफलको घोषणा बारेमा धेरै गलत छु, म येशू ख्रीष्टको चोर रूपमा हुनेछ भनेर थप होसियार हुन चाहनुहुन्छ र तपाईंले याद गर्छन्, र यसैले कुनै एक आफ्नो फिर्ती हुनेछ ठ्याक्कै गर्दा थाह छ।
साथै म संकेत को मेरो विश्लेषण अनुसार सेप्टेम्बर वा अक्टोबर को महिनाको आफ्नो फिर्ती यस वर्ष जसै, तर म येशू ख्रीष्टको अगाडि आउन र आफ्नो फिर्ती अघि कुनै पनि समयमा आफ्नो चर्च लाग्न सक्छ भनेर भन्न पर्छ।
म पनि यो फिर्ती पछि हुन र 2017 वा जसको लागि पनि समय आउँछ जब म व्याख्या गर्नेछ संकेत हो 2018 मा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भन्नुपर्छ।
त्यसैले निश्चित, प्रार्थना र येशू ख्रीष्टको आसन्न फिर्ती आशा छ ढिलो त्यो फिर्ता हुनेछ र कम दुखाइ मानवता लागि उज्ज्वल हुनेछ किनभने।
2016 मा यो वर्ष हुनत गाह्रो मानिसजातिको आशा, पश्चात्ताप र प्रार्थना येशू ख्रीष्ट हामीलाई अनन्त जीवनको पुस्तकमा दर्ता राख्छ कि एक वर्ष हामीलाई मसीहीहरूको लागि हुन लागि।
पश्चात्ताप र धेरै ख्रीष्टको आउन नरक मा सदाको खर्च गर्न चाहँदैनन् भने।
यो लेखन को समय मा प्रत्येक अझै पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ। परमेश्वरले तपाईंलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको र यस सही बाटो लिन समय छ।
एक पुजारी, पास्टर वा मसीही पानी बप्तिस्मा सोधेर द्वारा येशू ख्रीष्ट आउँछन् र त्यसपछि परमेश्वरको पवित्र आत्माको सुरक्षा तपाईंलाई मदत गर्न प्राप्त गर्न फेरि र फेरि प्रार्थना, रक्षा र आफ्नो कदम मार्गदर्शन अन्धकारको अन्त समयमा को बाक्लो मा।
प्रेम, हृदयमा र घरमा केही लागि चर्च हटाउने हाम्रो प्रभु र राजा येशू ख्रीष्टको यरूशलेममा जैतुन डाँडामा मा फिर्ती, परमेश्वरको मात्र छोरा को उमङ्गले शान्ति र सुख एक हजार वर्ष मानवता प्रलय अलग गर्न को लागि पृथ्वीको राजा राजा को आफ्नो शासनकालको लागि।
म मेरो लेख पढ्न तपाईं आमन्त्रण:
यदि येशू ख्रीष्टलाई ढिलो आउन, चर्च एक पीढी भन्दा कममा गायब!
डेनियल अन्त अन्त 2015 या 2016 अन्तिम हप्ता अन्त
समय प्रार्थना छ रूपमा म प्रार्थना गर्न आमन्त्रण:
प्रार्थना हाम्रो पिता र जय मरियम